Hatem Ben Arfa Oo Farriin Aargoosi Ah Warbaahinta U Mariyey Madaxweynaha PSG Nasser Al-Khelaifi Oo Diiday Inuu Gacan Qaado – Latest Sports News
Hatem Ben Arfa Oo Farriin Aargoosi Ah Warbaahinta U Mariyey Madaxweynaha PSG Nasser Al-Khelaifi Oo Diiday Inuu Gacan Qaado
Kooxda kubadda cagta Rnnes ayaa xalay ku guuleysatay koobka Coupe de France iyadoo lugtii labaad ay barbar-dhac 2-2 ah ku galeen PSG, laakiin ciyaartoodii hore ayaa sidaas oo kale waxay kusoo kala baxeen 2-2, taas oo qasab ka dhigtay in rikoodheyaal la dhigo, waxaana 6-5 ku adkaatay Rennes.
Kooxda koobka qaadatay ee Rennes waxa qayb ka ahaa weeraryahanka Hatem Ben Arfa oo dhawaan ka tegay PSG oo ay isku xumaadeen madaxweynaha Nasser Al-Khelaifi, iyadoo ay jireen warar tibaaxaya inuu wax ka sheegay qoyska boqortooyada Qatar.
Ben Arfa ayaa laagtay mid ka mid ah rikoodheyaasha, waxaana uu ku hubsaday shabaqa, waxaanu ka caawiyey Rennes in markii ugu horreysay tan iyo 1971-kii inay ku guuleysato Coupe de France iyadoo waliba joogta garoonka Stade de France ee ay iska leedahay PSG.
Ben Arfa waxa uu muddo 15 bilood ah ku sugnaa kooxda da’yarta PSG iyadoo loo diiday inuu yimaaddo kooxda waaweynka khilaafka Nasser Al-Khelaifi dartii, hase yeeshee xalay ay kooxdiisu ku guuleysatay Koobka, waxa safkii salaanta ee billadaha laysku guddoonsiinayey taagnaa madaxweynaha PSG oo gacanta ka laabtay markii ay Salaanta isla soo gaadheen.
Hatem Ben Arfa ayaa markaas kaddib waxa uu la hadlay warbaahinta, waxaana uu hadal aarsi ah u diray Al Khelaifi, waxaanu yidhi: “Natiijadu waxay isiisay dareen aan caadi ahayn. Wuxuu ahaa sannad adag, si aad ah ayaanu u shaqaynay si aanu halkan usoo gaadhno. Waxaanu ku qanacnay Rennes, qoyska reer Pinault iyo kooxda gebi ahaanba. Waxay noo tahay sharaf weyn.”
Intaa kaddib waxa uu Ben Arfa si toos ah uga hadlay madaxweynaha PSG, Nasser Al-Khelaifi, waxaanu yidhi: “Waa farxad gaar ah, waxayse arrin kale oo gaar ah u tahay madaxweyne Nasser. Waligaa intaad nooshahay ha yasin qof. Maalin baa iman doonta uu soo laaban doono isagoo xoog badan.”